အမေရိကန်ဗီဇာအမျိုးအစားများနှင့်ဗီဇာလိုအပ်ချက်များ | USAHello ထံမှအရင်းအမြစ်များ | USAHello
သငျသညျကို USA မှလာချင်ပါနဲ့? သင် USA တွင်ဖြစ်ကြပြီးသင့်ရဲ့ status ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါဘူး? သငျသညျဖြစ်ကောင်းအမေရိကန်ဗီဇာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. မတူညီသောအမျိုးအစားများအကြောင်းကို Read, သင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးများထဲမှရှာတွေ့, နှင့်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
လိုခငျြသူမြားကလူလာများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နထေိုငျအတှကျပြောင်းရွှေ့လာသောလူပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာများမှာ. သင်တစ်ဦးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် လူဝင်မှုဗီဇာစာရင်း ဦးစီးဌာနပြည်နယ်၏ website တွင်.
အရေးကြီးမှတ်ချက်: အောက်တိုဘာလတွင် 4, 2019, အမေရိကန်သမ္မတလူဝင်မှုဗီဇာနှင့် ပတ်သက်. ၌ကြော်ငြာကြ၏.
အဆိုပါကွှေးကျွောခွငျးနိုဝင်ဘာလအပြီးကပြောပါတယ် 2, 2019, ယူအက်စ်အေမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်မဆပ်နိုင်သူလူတွေကိုလူဝင်မှုဗီဇာမပေးပါလိမ့်မယ်. ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူသူတို့ကျန်းမာရေးအာမခံသို့မဟုတ်အခြားအတည်ပြုပြီးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုပြရပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကျန်းမာရေးအာမခံ.
အသစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုဒုက္ခသည်လျှောက်ထားပါဘူး, ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ, ကျောင်းသားများအတွက်, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ငွေနှင့်သို့မဟုတ်ကလူ. သင်လုပ်နိုင်သည် အဆိုပါကွှေးကျွောခွငျးဖတျရှု သစ်ကိုအုပ်စိုးမှုအကြောင်းပိုမိုအသေးစိတ်.
Non-Immigrant ဗီဇာသွားရောက်ကြည့်ရှုချင်သောလူအဘို့ဖြစ်ကြ၏. ဧည့်သည်များဧည့်သို့မဟုတ်သွားရောက်လည်ပတ်မိသားစုဝင်များဖြစ်နိုင်သည်. သူတို့ကခဏလာများနှင့်အလုပ်မလုပ်သို့မဟုတ်လေ့လာဖို့လိုပေမည်. သင်တစ်ဦးကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Non-Immigrant ဗီဇာစာရင်း ဦးစီးဌာနပြည်နယ်၏ website တွင်.
ဒါဟာညာဘက်ဗီဇာရှေးခယျြဖို့ဘယ်လိုသိရန်ရှုတ်ထွေးစေနိုင်သည်. အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန၏ ဗီဇာ Wizard ကို ကူညီလိမ့်မယ်. ဒါဟာတချို့အခြေခံမေးခွန်းများကိုမေးတယ်, ထိုကဲ့သို့သောသင့်ထံမှဖြစ်ကြပြီးဘာလို့သင်ယူအက်စ်အေမှလာမယ့်နေကြသည်ဘယ်မှာအဖြစ်. သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကိုဖြည့်ရန်မလိုပါ. သင့်ရဲ့အဖြေကိုပေါ် မူတည်., ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသင်ပြပါလိမ့်မယ်. ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ၏မတူညီသောအမျိုးအစားများသူတို့ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အက္ခရာများရှိ.
ပဌမ, မှသင်လိုအပ်သည့်ဗီဇာရှေးခယျြ State.gov စာရင်း. လာမယ့်ဗီဇာအမျိုးအစားကိုမှလင့်ခ်ကိုရွေးချယ်ပါ. အဆိုပါ link ကိုစာတစ်စောင်သို့မဟုတ်အက္ခရာများနှင့်မကြာခဏနံပါတ်တစ်ခုဖွစျလိမျ့မညျ, အရမ်းဥပမာ - ဂျေသို့မဟုတ် H1-B.The link ကိုကြောင်းဗီဇာစာမျက်နှာအသေးစိတျနဲ့ညွှန်ကြားချက်ရန်သင့်အားကြာမြင့်မည်.
သင်တစ်ဦးလူဝင်မှုဗီဇာလျှောက်ထားဖို့ link ကို select လုပ်သည့်အခါ, သင်ဦးစီးဌာနပြည်နယ်၏ website ကိုစွန့်ခွာနှင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏ဘ်ဆိုဒ်ကိုသွားပါလိမ့်မယ်.
ယူအက်စ်အေအကြမ်းဖက်ဝါဒ၏ပြည်နယ်စပွန်ဆာဖြစ်လေးနိုင်ငံများကကြေညာလိုက်ပါတယ်. ယူအက်စ်အေကဤလေးမျိုးနိုင်ငံများတွင်အကြမ်းဖက်သမားများကိုကူညီပြောပါတယ်. သူတို့က: ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (မြောက်ကိုရီးယား), အီရန်, ဆူဒန်, နှင့်ဆီးရီးယား. သင်တို့သည်ဤလေးမျိုးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုတစ်ခုနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျတွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်
အချို့နိုင်ငံများတွင်အမေရိကန်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်အစီအစဉ်. သူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကို USA မှလာမယ့်ဗီဇာမလိုအပ်ပါဘူး. အဲဒီအစားဧည့်သည်များခရီးသွားခွင့်ပြုချက်အဘို့အအီလက်ထရောနစ်စနစ်ဟုခေါ်သည့်အစီအစဉ်ကိုမှတဆင့်ခွင့်ပြုချက်ရ (ဒီနည်းကို). သင်တို့အဘို့ကို USA မှလာမယ့်နေလျှင်သင်နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုတစ်ခုနိုင်ငံသားဖြစ်ကြပြီးလျှင်သင် ESTA များအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် 90 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဘို့ဒါမှမဟုတ်ခရီးသွားဧည့်အဖြစ်ရက်ပေါင်းဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း.
သင့်ရဲ့ဗီဇာလျှောက်လွှာပုံစံကိုသင်၏လူမှုမီဒီယာသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်. သငျသညျအကွောငျးကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန၏သင်၏လူမှုမီဒီယာတွေအကြောင်းသိရန်လိုသည်အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဘာလုပျသလဲ.
အရေးကြီးမှတ်ချက်: တစ်ဦးကဗီဇာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ entry ကိုအာမမခံ. ဒါဟာသင်အမေရိကန်နိုင်ငံသွားရောက်ခွင့်ပြု, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲတစ်ဦးအမေရိကန်အကောက်ခွန်နှင့်နယ်စပ်ရေးရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် entry ကိုငြင်းပယ်ခံရနိုငျ (CBP) ဝင်လာနေထိုင်ခြင်း. အကြောင်းပို Read ယူအက်စ်အေမှဝန်ခံချက်.
လူဝင်မှုမဟုတ်သလို Non-Immigrant မဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအခြားအမျိုးအစားရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောစစ်တပ်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖြစ်, ဆေးကုသမှုရတဲ့သို့မဟုတ်ကလူ. သငျသညျအကွောငျးကိုဖတ်နိုင် သည်အခြားဗီဇာအမျိုးအစား.
သင်တစ်ဦးလူဝင်မှုဗီဇာရှိပါက, သငျသညျကိုနောက်ခြေလှမ်းကို ယူ. အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်လာမှလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်. ယူအက်စ်အေတစ်ဦးအမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်လာမယ့်ရှည်လျားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အများကြီးဗီဇာကိုင်ဆောင်သူအရည်အချင်းပြည့်မီ. အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဖြစ်လာအကြောင်းပိုမိုနှင့်လေ့လာပါ သင့်ရဲ့အစိမ်းရောင်ကဒ်ရရှိ.
တစ်ဦး TPS သို့မဟုတ် DED ကိုင်ဆောင်သူ
အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ လူများတို့သည် USA တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ပြုကြောင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအစီအစဉ်များ.
ဤအချက်အလက်သည်သင်ဗီဇာတွေအကြောင်းနားလည်ကူညီရန်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်. ဒါဟာထံမှသတင်းအချက်အလက်များပေါ်တွင် အခြေခံ. ခဲ့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ. ဒါဟာတတ်နိုင်သမျှမကြာခဏမွမ်းမံ. USAHello ဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရည်ရွယ်ထားပါသည်. သင်တစ်ဦးအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ အခမဲ့နှင့်တန်ဖိုးနည်းဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေ.